Soomaalida Gobolka Ohio iyo xuska 1da Luulyo SAWIRRO | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Soomaalida Gobolka Ohio iyo xuska 1da Luulyo SAWIRRO
Soomaalida Gobolka Ohio iyo xuska 1da Luulyo SAWIRRO
Kumanaan Soomaali ah ayaa ka soo qeybgashay xaflad lagu maamuusayay Sanadguuradii 57aad ee ka soo wareegtay markii uu dalka Soomaaliya ka xoroobay gumeestihii goboladda kala haystay taas oo ka dhacday magaalada Columbus Ohio.
Waxaa munaasabadan goobjoog ka ahaa shaqsiyaal si weyn bulshada looga dhexyaqaan, iyo Masuuliyiin ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo dhamaantood si weyn ugu xeel dheeraaday ka sheekaynta ahmiyada ay malmahaani u leeyihiin Umadda Soomaaliyeed.
Masuuliyiinta Jaaliyada Soomaaliyeed ee soo abaabulay xafladan ayaa dhankooda sheegay in ujeedkoodu yahay in Jiilasha soo koraya iyo kuwa imaan doona ay dhaxlaan taariikhdooda loona qeexo marxaladihii loo soo maray halgankii xoriyada iyo isbadaladii Guulaha iyo Guuldaradaba xanbaarsanaa taas oo si cad u sharaxaysa wixii dhacay xiligii Gumeystaha iyo Kadiba.
Dhamaan masuuliyiintoo ka hadashay oo ay ku jireen Masuuliyiin ka socday Xaafiiska Duqa Columbus kuwaas oo matalayay Maamulka gobolka Ohio.
Inta badan caalamka ayaa laga xusaa maalintan taas oo astaa u ah jiritaanka dalk iyo dadka Soomaaliyeed.
Kooxda Midnimo ee ka dhisan Columbus ayaa Heeso wadani ah kaalintooda kaga ciyaaryay halka Abwaan Soomaaiyeedna uu ku soo bandhigay Gabayo aad u qiirobadan oo ka hadlaya Ahmiyada xornimada iyo jiritaanka Umadda.